Misy kodiarana manokana ve tsy misy tubeless? - Kodiarana
Tena > Kodiarana > Kodiarana tubeless manokana - vahaolana miorina amin'ny hetsika
Kodiarana tubeless manokana - vahaolana miorina amin'ny hetsika
Misy kodiarana manokana ve tsy misy tubeless?
Namboarina toy ny tsy misy hafa, mitaingina toa ny hafa.Tiresraharaha amin'nymanokana. Ny tanjontsika dia tsy ny hampivelatra ATRANO TRANO, FA ATYROIZANY NO DADEHA, MAFY AZA ATAO, FITANDREMANA LEHIBE, ARY FITSARATANA AZY.
Raha mijery lahatsoratra GMBN be dia be ianao, impiry angamba isika no nilaza taminao fa tsara kokoa ny tubeless? Mora kokoa ary tsy hahazo izany kodiarana fisaka izany ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia hivoaka any izahay ary hanaporofo izany. Ho hitantsika raha mora kokoa izany ary vitsy kokoa ny punctures azonao amin'ny fitsapana. Ka ndao aloha hanomboka.
Noho izany, raha tsy fantatrao hoe inona ny tubeless, dia miala amin'ny fantsona ianao amin'ny ankapobeny. Mila kasety vitsivitsy ianao, mila valvaly ianao, tombo-kase sasany, fehezo miaraka amin'ny kodiaranao sy ny kodiaranao ary hey presto! Tsy manana tubo ianao ary vonona handeha. Raha te hahafantatra ny fomba hanaovana azy ianao dia manana lahatsoratra feno sy lalina izay mampiseho anao ny fomba hanaovana azy.
Fa andao ny ohatra voalohany. Mazava kokoa ny tubeless amin'ny voalohany. Aleo porofoina fotsiny izany amin'ny mizana natsangako eto amin'ny sisin'ny karbonina FSA faran'izay maivana.
Avy eo dia hametraka ny kodiarana isika. Okay, milanja 1.615 izany. Ary farany dia tonga tao amin'ny fantsona anatiny izahay.
Ka noho izany fananganana izany dia tonga amin'ny 1.855. Andao esorina indray ity fantsona ity. Hametraka ny valizy amin'ny sisiny ihany isika.
Raha mahita ny lavaka valizy aho dia apetrako ao anaty kodiarana izany. Ka izao andao ampiana tombo-kase tsy misy tubes 100 mil. Izany no mitondra ahy eto amin'ity andalana ity eto.
Eny ary, izany no sombin-tombo-kase farany. Manana mil 100 aho ao, izany ny habetsaky ny tavoahangy iray, ary 1,74 kilao ny lanjany.
Mazava 100 grama iray manontolo. Mythbust iray vita satria maivana kokoa ny tubeless. Eny ary, dia noporofoinay fa ny fananganana tsy misy fantsona dia mahavonjy 100 grama isaky ny kodiarana spar.
Fa inona no tena dikan'izany amin'ny bisikileta? Satria ianao dia hamonjy volo mihodina. Eny, ny volavolan-tsolika dia ny masaka izay mihetsika foana, noho izany ny zava-misy eo amin'ny kodiaranao no misy vokany lehibe indrindra ao. Eny, izany hoe, toy ny endriny mihitsy na koa ny hatairana amin'ny bisikileta.
Fa inona no vokatr'izany eo aminao rehefa mitondra fiara ianao? Avelao holazaina fa ny masam-pihodina dia afaka mahatratra hatramin'ny avo telo heny noho ity lamina mijanona ity. Ka nitahiry 100 grama fotsiny isika izao, ka intelo heny noho izany. Nitahiry 300 grama ary avy eo manana kodiarana roa.
Nanangona 600 grama izahay ho an'ny fanavaozana somary tsotra sy mora izay tsy handany vola be aminao. Ankehitriny izany rehetra izany dia vita amin'ny raikipohy ho an'ny fotoana inersia. Raha manana mpahay siansa any izahay, tianay ianao hanaporofo fa marina izahay, na na diso aza izahay.
Azonao atao ny mampahafantatra anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany ary homeko marika ny asanao. Fantatray àry fa maivana kokoa ny tubeless, kely kokoa ny fihodinanao sy ny lanjanao, fa inona kosa izahay? Tena tiako ho fantatra raha ho kely ny punctures ho azonao? Ka andao hizaha toetra azy. Satria manana ny kodiarana amin'ny jig aho.
Hoentiko eto ny fitaovako, tsilo io. Hanindrona ny kodiarana isika ary hametraka lavaka ao anatiny ary hizaha raha toa ka misy tombo-kase. Vonona amin'izany ve ianao? Telo, roa, iray ary hoentiko kodiarana ny fitaovako. (Feo manelingelina) Eny, maheno rivotra mivoaka ianao.
Andao hihoarantsika izany ary antenaina hamehezana azy. Eny ary, mivoaka ny tombo-kase isika. Tsy misy rivotra afaka.
Ka izany manaporofo ny tombo-kase, tubeless setup nanao ny asany. Raha manana fantsona amin'ity kodiarana ity ianao dia ho lalao raha manindrona ny init ianao satria tsy ho afaka hamehezana ny fantsona. Ho afaka ny rivotra ary ho tapitra ny dianao. marika iray hafa tsy ilaozan'ny tubeless izany.
Eny ary, tohizo, mahazo entana ao anaty kodiarana isika. Andao hiresaka bebe kokoa momba ny fiantraikany sy ny zavatra toy ny bibilava. Jereo izao izay mitranga rehefa mahazo manaikitra bibilava ianao dia misy fiantraikany eo aminao izany, raisiko ho ohatra ny tanako ary miditra tsara izy io.
Mamaky ny kodiarana izy ary mamely ny fantsom-by eo amin'ny sisiny. Izao dia misy fiantraikany io, satria mitambatra amin'ny zavatra roa izy io ary eo afovoany ny fantsona, voafintina tokoa ilay fantsona ary izany no mahatonga ny bibilava. Ireo lavaka kely kely roa ireo, saika toy ny nify bibilava, ha dia niditra tao amin'io fantsona io aho ary niteraka kodiarana fisaka.
Amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny tubeless, satria tsy manana fantsona ianao, dia tsy hahazo an'ireo manaikitra bibilava ireo. Izany no antony iray hafa tokony handehananao tsy misy tubeless, ary mazava ho azy, vitsy ny lozam-pifamoivoizana dia midika fotoana bebe kokoa. Satria manana fiarovana puncture tsara kokoa amin'ny rafitra tsy misy fantsona ianao, izany dia midika fa mihazona bebe kokoa ianao.
Ary izany no tiako holazaina fa mety ho ketraka tokoa ianao satria raha mieritreritra an'izany ianao dia hahazo tsindry bebe kokoa rehefa miasa rafitra fantsom-pandrosoana. Satria tsy te handalo tena mafy ianao ary mahazo manaikitra bibilava, na tsy te hiditra ao anaty kodiarana ianao, mila tsindry kely kokoa aho, fa noho ianao manala ireo olana roa ireo amin'ny rafitra tsy misy fantsona, azonao atao ny mamoaka tsindry kely. Tsy miresaka vola be eto aho izao.
PSI roa, telo, efatra no resahiko. Tonga amin'ny fanandramana kely daholo izany satria tsy tianao ny hikodiadia na hilona ao ambaninao ny kodiarana. Raiso ity kodiarana ity miaraka amin'ny sira kely.
Fanandramana kely. Mamoaha PSI vitsivitsy. Hihazona bebe kokoa ianao, midika izany fa ho afaka mitaingina ireo fihodinana ireo ianao ary afaka miala sasatra vitsivitsy avy eo.
Izay mifandimby kosa dia midika fa ho haingana kokoa ianao ary hifalifaly bebe kokoa. Eny ary, ka ho an'ny fitsapana fahadimy sy farany, manana roa aho? Kodiarana eto. Mitovy ny peratra, mitovy ny kodiarana ary mitovy ny tsindry ao anatiny.
Ny mahasamihafa azy fotsiny dia ity misy fantsona ity ary ity, eny, tsy misy fantsona aho manao fitsapana faneriterena kely mba hampisehoana aminao rehefa tena tsy mandeha amin'ny tsindry intsony izy ireo. Ka rehefa apetako amin'ny fantsona ity iray ity dia azonao tsapain-tanana fa sarotra be ny manova ny kodiarana. Rehefa raisiko ny kodiarako tsy misy fatrany dia somary mora kokoa ny manova ilay kodiarana.
Satria tsy manana fantsona anaty ianao dia midika izany fa tsy dia ilaina ny fanoherana mba hanaratsiana ny kodiarana. Midika izany fa mandoa vola kely kokoa ianao. Hisitraka ny sasany amin'ireo fiantraikany kely ireo.
Angamba raha mandeha miorim-paka ny fakany sy ny vatonao amin'ny hafainganam-pandeha ianao, dia ho mora kokoa aminao izany. Tsy izany no tsikaritry ny ankamaroan'ny mpamily. Fa rehefa mitaingina ambaratonga avo indrindra ianao dia tena manampy tokoa.
Mandeha zava-misy vitsivitsy momba ny antony itiavanao mandeha tsy misy fantsona. Manantena aho fa nopotehiko ny andiana entana marobe ary nolazaiko anao ny antony tianao hanaovana tubeless. Tsotra be izy io, ary fanatsarana tsara tokoa, ka mety tsy ho tadiavinao mihitsy izany raha te hahita lahatsoratra misimisy kokoa avy amin'ny GMBN ianao avy eo misoratra anarana amin'izy ireo mba tsy ho tara intsony ianao.
Avy eo tsindrio fotsiny raha handeha Tubeless ary kitiho eo raha hametraka ny tsindry kodiaranao. Raha hitanao fa mahasoa ity lahatsoratra ity dia zarao amin'ny namanao ary omeo b-up ankihibe izahay. Mihobia!
Turbo Pro Tyro manokana ve tsy misy tubeless?
Specialised'sisan-karazany nyTiresefa lasa lavitra ary mampiasa vola be izao ny orinasatubeless. Ity vaovaoS-Works TurboRapidAir, novolavola ho an'ny tombony, dia manolotra fampisehoana mora sy tena tsara.
Ity lahatsoratra ity dia mampiseho aminao ny fomba hametahana tsara ny kodiarana S-WorksTurbo RapidAir amin'ny kodiarana vonona tsy misy tubily amin'ny fametrahana tubeless. Raha manaraka ny fomba naseho ianao dia afaka mametraka ny kodiarana RapidAir amin'ny fomba azo antoka sy azo antoka, izay manolotra tombony be dia be ary manatsara be ny bisikiletanao. Zava-dehibe ny fampiasana fitaovana sy kojakoja mifanaraka aminy.
Manoro hevitra anao izahay handeha any amin'ny fivarotana bisikileta akaiky anao indrindra haka azy ireo raha tsy manana izany ianao. Mora ampiasaina izy ireo, tsy lafo ary miantoka fametrahana mora foana. Ireo no mpanjaitra RapidAir; Vy vy; ary paompy amin'ny gorodona.
Azonao atao koa ny mampiasa AirTool Blast manokana na compresseur rivotra raha toa ka mila fanampiana amin'ny famehezana ny kodiarana ianao. Rehefa mametraka kodiarana RapidAir amin'ny kodiarana Roval, na izany aza, tsy mila compresseur rivotra matetika. Raha tsy maintsy mampiasa iray ianao dia alao antoka fa hanaraka ny fomba fiarovana rehetra voalaza ao amin'ny boky torolàlana an'ny tompona ianao.
Tokony hojerenao foana ny sisin'ny sisiny ary alao antoka fa tsy misy dity na triatra mety hanimba ny kodiarana. Ny tombo-kase taloha dia tokony hesorina ihany koa amin'ny fametahana vakana tsara indrindra. Raha mampiasa plug-n'ny rim ianao dia zahao tsara ny tsirairay mba hahazoana antoka fa tsy tapaka ilay peratra vita amin'ny fingotra.
Ny peratra O vaky dia sarotra jerena. Noho izany, jereo akaiky ireo mpampitohy tsirairay alohan'ny hametrahana. Rehefa mampiasa kasety rim vonona tsy misy tubeless dia alao antoka fa azo ampifandraisina tsara amin'ny fihenjanana izy io ary manarona ny farafara fandriana amin'ny sisin'ny sisin-tany rehetra hatramin'ny sisin'ny talantalana mankany amin'ny sisin'ny talantalana.
Ny kasety dia tsy tokony hisy ketrona. Raha nividy kodiarana Roval vaovao na bisikileta namboarina miaraka amin'ny kodiarana Roval ianao, ny kasety rim dia misy kasety rim vonona tsy misy tubeless efa napetraka. Ampiasao ireo valves tsy misy fantsona miaraka amin'ny bisikileta na kodiarana.
Apetraho ny vatan'ny valizy tsy misy fantsona, ho azo antoka fa tsy simba ny peratra o ary ahenjana ny valan-tsofina. Alao antoka koa fa tery ny voanjo. Rehefa avy nikasika ny sisiny ilay voanjo dia avadiho indray ny fihodinan'ny 1/2 ka hatramin'ny 3/4 - aza mampiasa fitaovana satria mety hanimba ny sisin-tananao izany ary hanasarotra ny famongorana ny vongan-tsofina.
Tandremo ny làlan'ny mari-pamantarana fihodinana mba hipetraka tsara amin'ny kodiarana ny kodiarana. Ataovy afovoany eo ambonin'ilay vodin-tsavony ilay fantsona mafana ho an'ny fijerin'ny efitrano fampisehoana. Manomboka amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny vodin-tsivana, ampiasao ny ankihiben-tànana roa hanandratana ny vakana hatrany amin'ny sisiny, hahazoana antoka fa eo afovoany ireo vakana.
Aza hadino ny mametraka ny ankihiben-tànanao amin'ny vakana fa tsy ny casing pne; manamora kokoa ny fametrahana vakana ity. Raha te hampiditra tombo-kase amin'ny kodiarana ianao amin'ny alàlan'ny valizy, mandrosoa ary apetraho ny ilany hafa amin'ny kodiarana hatramin'ny manodidina ny sisiny. Manomboha mifanohitra amin'ny valizy ary miafara amin'ny valva, raha tsy izany avelao ny vakana kely amin'ny vongan-tsofina avy amin'ny sisiny ary akatony koa ny vakana faharoa.
Hamarino tsara fa apetraka eo afovoan'ny sisiny ny vakana ary tsy mifikitra amin'ny fitoeran-tsolika. Ny tombo-kase mahazatra dia tsy natao hampiasaina amin'ny tsindry mafy amin'ny kodiarana. Ny RapidAirsealant dia natao ho an'ny kodiarana eny an-dalambe izay miakatra amin'ny tosidra avo lenta ary mifanaraka amin'ny simika amin'ny kodiarana, kodiarana, kasety ary sisin-damba.
Miantoka ny fahombiazana farany azo atao izany. Ny firafitra dia misy filamenta mivaingana manokana izay miantoka fa misy ratra na lavaka mihidy ary mihidy avy hatrany. Fenoy ny kodiarana amin'ny famehezana RapidAir amin'ny alàlan'ny fandrarahana azy ireo na amin'ny kodiarana misokatra na amin'ny valizy tsy misy fantsona.
Raha nandatsaka tombo-kase mivantana tao amin'ny kodiarana ianao dia avadiho moramora ny kodiarana mba hahafahana manitsy ny fizarana vakana farany nefa tsy mandraraka tombo-kase. Hamarino manodidina ny kodiarana fa ny vakana dia miorina eo afovoan'ny tendron'ny molony. Ny vakana kodiarana dia tokony hipetraka manodidina ny vatan'ny valizy ary, raha nampiasa plugs dia tsy tokony hisy hita.
Mihazakazaha manodidina ny lafiny roa amin'ny sisiny ny rantsan-tànanao, ataovy izay tsy hivoahan'ny vakana amin'ny fotoana rehetra. Manomeza kapoka efatra ka hatramin'ny enina amin'ny paompinao hampiakarana ireo vakana. Tohizo ny fampidinana ny kodiarana amin'ny tsindry ambony indrindra araky ny voalaza eo amin'ny sisin-tany na amin'ny kodiarana, izay ambany.
Raha ilaina dia azo esorina ny valan-tsavony mba hampitombo ny fikorianan'ny rivotra mankamin'ny kodiarana. Tsy mamporisika anao hampiasa ny CO2 amin'ny fametrahana voalohany ny kodiarana izahay, fa aza misalasala mampiasa azy raha ilaina ny fanamboarana amoron-dalana. Miakatra amin'ny vakana ny kodiarana ary manisy tombo-kase manodidina ny faritra misy ny vakana.
Raha tsy mora miakatra ny kodiarana ary mijanona eo afovoan'ny afovoany dia atsofohy amin'ny tombo-kase ny faritra afovoany afovoany mba hiparitahan'ny vakana mankany amin'ny farango. Miasa ny rano misy savony na dia tsy te hampiasa tombo-kase aza ianao. Ahintsano ny kodiarana alohan'ny hidiranao amin'ny kodiarana mba hahitana fa voazara ara-dalàna ny tombo-kase.
Rehefa ampidiro ny kodiarana dia alao antoka ihany koa fa ny elanelana misy eo amin'ny tsipika rim sy ny sisin'ny sisiny manodidina ny kodiarana dia mitovy amin'ny lafiny roa amin'ny sisiny. Mandeha bisikileta amin'ny tsindry farany ambony mandritra ny dimy minitra mba hizarana mitovy ny tombo-kase manerana ny kodiarana. Amboary ny kodiaranao amin'izay fanerena tianao.
Zahao foana ny tsindry kodiarana alohan'ny hiainganao. Raha mametraka kodiarana taloha amin'ny sisin-dàlana napetraka ianao, dia tsy maintsy diovinao ny fotony sy ny vodi-kodiarana. Ny sisa tavela amin'ny tombo-kase taloha dia hampihena ny fahafahan'ny tabilao miorina tsara.
Mangetaheta kodiarana vaovao; Rehefa avy nahavita ny fanamboarana ianao, ny tombo-kase RapidAir dia mameno ny lavaka mikraoskaopy amin'ny kodiarana. Ny habetsaky ny tombo-kase dia ampiasaina amin'ity dingana ity. Manoro hevitra izahay ny hanamarina ny haavon'ny tombo-kase aorian'ny familiana sy ny fametahana mandritra ny 10 ora raha ilaina mba hahazoana fiarovana tsara indrindra sy fiarovana amin'ny puncture.
Ankafizo ny dianao!
Inona no kodiarana tsy misy tubily tsara indrindra?
Tubeless tsara indrindralalanaTires2021, naoty ary naverina nodinihina
Goodyear Eagle F1.
Schwalbe Pro Iray TLE.
Grand Prix Grand Continental 5000 TL.
Hutchinson Sector 28.
Pirelli P Zero Race TLR.
S-Works Turbo 2Bliss manokana.
Okay eto amin'ny garazy atoandro atoandro hiandry kely, efa elaela izay no tsy nivoahantsika teto Ka nieritreritra aho fa hanome anao ny hevitro momba ny androm-piainan'ny kodiarana tsy misy fantsona GP5000 androany. Ankehitriny dia misy famerenana be dia be ao amin'ny GP5000 satria rehefa navotsotra ny y dia lasa lavitra be izy ireo ary ny fanadihadiana dia manarona ireo andinindininy, ny fanoherana mihodina. Kodiarana haingana izy ireo.
Ny lanja hividianana entana fa efa nitady naoty maharitra aho ary tsy dia maro amin'izy ireo. Ka anio no fiainana sy fahafatesan'ny kodiarana GP5000 TL roa. Noho izany, raha nilalao ny lalao lava teto amin'ny GP Lama Channel ianao, dia ho fantatrao ny zavatra niainako tamin'ny kodiarana tsy misy fantsona, indrindra fa ny fivoriambe dia somary ambony ambany no nidina, raha lazaina, vaovao ny fivorian'ny kodiarana! Valo minitra mialoha, valo minitra ao aoriana.
Tsy misy olana mihintsy ny peratra vaovao eny an-dalana tsy misy fantsona, tsy misy olana mihintsy, Tonga eo amin'ny làlana io rehefa manandrana manamboatra na manova azy ireo ianao, eny izay somary manahirana ahy izany, saingy tsy misy amin'ireo olana ireo amin'ny GP5000 TLs. Nanohy tsy nisy olana izy ireo. Vantany vao tafapetraka eny amin'ny arabe Tsy dia be ny mitatitra fa tena misy ny kodiarana.
Ny zorony, ny fihazonana, ny fahatsapana mitondra fiara, tsara daholo, raha ny marina. Tsy tsapako ireo tahirimbola vitsivitsy teo alohany sy tao aoriany noho ireo kodiarana ambony ireo satria raha ny marina dia bebe kokoa ny habetsaky ny kafe laniko alohan'ny diany, izay manampy ahy hahazo tongotra haingana kokoa noho ny fijerin'ny bisikileta haingana kokoa hoe eto aho. te hiteny. Tsy mampiova ampondra ho racehorse ve ny fametrahana ireo kodiarana ireo? Ny kodiarana no resahiko eto.
Tsy ny mpamily. Mety nahatsikaritra ianao fa ny kodiarana voalohany dia tsy GP5000 TL raha ny marina. Misy ny antony mahatonga azy io aorian'ny familiana mandritra ny herinandro vitsivitsy ary 400 kilometatra fotsiny.
Ity no zava-nitranga tao rehefa nizaha ny kodiarako aho rehefa avy nitaingina roa, dia hitako ity: tapaka teo amin'ny sisin-dàlana izay namakivaky ny fatana sy namaky ilay lamba koa. Ka tapitra ny lalao ity.
Ka inona no ataontsika Eny, afaka nanova kodiarana fotsiny isika, saingy talohan'ny nanovako ny kodiarana dia noheveriko fa hatosiko hatrany amin'ny fetrany. Atsofohy hatramin'ny 140 PSI ny kodiarana. Avelao eo amin'ny masoandro ity mba hahitantsika hoe ohatrinona no azontsika atosika handroso.
Ka izany no mitranga amin'ny miadana-moSo, eny somary mahamenatra fa tsy nanararaotra nanao ilay afovoan-tany ivelan'ny orinasa akory ity kodiarana ity, ka diso fanantenana lehibe tokoa raha milaza ny marina. Tsy nahatsapa an'io fahatapahana io aho na ny NICI dia tsy nandalo loto teny amoron-dalana. Ireo lalana izay alehako eto dia mazava ho azy fa tsara, fa ny famerenana anio, ny fitsapana maharitra amin'ity GP5000 ity, dia ho fitsapana maharitra avy amin'i Just the Rear.
Satria ny GP5000 TL eo aloha dia tsy safidy intsony, dia miroso amin'ny tatitra ataoko momba ny fitsapana maharitra ny kodiarana aoriana aho. Tsy maninona. Tsy misy kodiarana fisaka.
Raha ny fahombiazana dia toy ny kodiarana no fihetsika. Tsy ok izany fa tsy nisy olana fa taorian'ny 4,500 kilometatra na 2,800 kilometatra dia manomboka mipoitra tampoka aho izao izay nanaitra ahy halina rehefa nahita izany tamin'ny fitsirihana bisikileta ankapobeny aho fa niverina tany anaty hazo ary nahita fa nitondra fiara aho hatreto, izany angamba no antenainao amin'ny kodiarana hazakaza / fampisehoana. Raha hamintina ny tatitra momba ny zavatra niainako maharitra sy ny zavatra niainako tamin'ny GP5000 TL, ny rambony dia volana vitsivitsy lasa izay.
Fametrahana: Tsy misy olana. Fampisehoana fahendrena: tsara ny zava-drehetra. Fanoherana ny paingotra: ankoatry ny antsamotady.
Namirapiratra izy io. Tsy misy punctures amin'ity kodiarana aoriana ity. Tamin'ny voalohany dia somary niahiahy momba ny hainganana izany foana aho mandra-pahatongako namaky ireo hazako ary hitako fa nitondra izany kilaometatra maro izany aho.
Ka ho ahy ny mitaingina ahy, ny tsindry entiko ary ny fomba mitaingina entiko. Mety tsy dia ratsy izany. Miovaova ara-bakiteny ireo kodiaranao amin'ireo kodiarana ireo.
Rehefa mpitaingina maivana kokoa ianao, rehefa eo amin'ny tsindry sy lalana samihafa. Rehefa mitaingina bisikileta amin'ny mpampiofana ianao, dia tsy fantatra ny androm-piainanao amin'ny kodiarana. Manaraka ny naoty kintana dimy avy aty amiko aho amin'ity maridrefy misy azy ity, dia manombana amin'ny * meh * ny zavatra niainako dia somary mifangaro, indrindra fa ny fanaparitahana an'io eo aloha.
Ka jereo, angamba amin'ny efatra - efatra sy sasany amin'ny dimy. Mbola kodiarana tsy misy fantsona io. Tsy mbola nanana ny zavatra niainako manontolo tamin'ny famindrana azy ireo teo aloha aho.
Tsy nanana afa-tsy iray aho taorian'ny roa herinandro. Tsy nila namboariko izany, izay mety ho raharaha kely tsy misy fantsona, fa amin'ny ankapobeny, tsy kodiarana ratsy. Tsy hiara-hivezivezy amin'izany aho raha tsara vintana fa manana fampihetseham-batana sy hazakazaka.
Tohizo ireo miaraka amin'ny sokajy hazakazaka. Aza manahy momba ny fiofanana momba azy ireo. Ary raha tsy manam-bola handoroana ianao dia mino aho fa manana kodiarana mahafinaritra amin'ny kodiarana fiofanana.
Tsy ny vaovao ratsy rehetra ho an'i Continental no jerenao. Handeha kodiarana GP5000 clincher aho. Ka manana fononteny kely aho. 25mm Clincher hapetrako fantsona tara-pahazavana eo amboniny, izay asehon'ny angon-drakitra fa mora ampiasaina amin'ny fanoherana mihodina, koa araho ao anatin'ny volana vitsivitsy (miampita ny rantsan-tànana) hanaovana fitsapana maharitra ny kininin'ireo kodiarana ireo miaraka amin'ny fahavaratra lava mialoha.
Tour Down Under dia handrakotra kilometatra maro eo anelanelany, ao anatin'izany ny Festive 500. Andao hojerena raha maharitra izany. Tsara izany.
Misaotra mitady ary mirary faran'ny herinandro mahafinaritra. Oh, ary tsarovy ny manamarina ny kodiaranao !! Somary nampidi-doza ilay izy!
Mampiasa kodiarana tsy misy fantsona ve ny pro?
Ao amin'ny tontolon'ny hazakaza-piarakodia matihanina,kodiarana tsy misy fantsonamijanona ho zava-baovao. Ny ankamaroan'nymatihaninamitaingina tubular nentim-paharazanaTiresnapetaka amin'ny peratra manokana tubular, ary na dia nisy aza tranga marihinamatihaninamihazakazakatubeless, tsy dia nisy porofo kely momba ny fiovan'ny ranomasina tamin'ny fiheverana azynyteknolojia.
Amin'ny familiana haingam-pandeha dia nisy hatrany ny adihevitra teo amin'ny kodiarana tubular sy clincher. Saika ny matihanina rehetra izao dia mampiasa kodiarana tubular. Fa maninona Misy karazana tombony azo amin'ny fampisehoana ve? - Ie.
Alohan'ny handehanantsika any an-toeran-kafa dia aleo aloha hadio ny zava-misy. Inona marina ny kodiarana tubular? Izy io dia iray izay ahantona mihidy ny kodiarana, nofonosina fantsona, ary avy eo nopetahana tamin'ny fantsom-p tubozy ny zava-drehetra. Eny, fomba nentim-paharazana tokoa izy io ary, sahy lazaiko, kely arisika - angamba.
Eny, ny kodiarana clincher izay mahazatra antsika kokoa. Izy io dia kodiarana iray voafatotra amin'ny sisin'ny sisin-tany amin'ny alàlan'ny fanindriana ny vakana ny vodin-kazo ao amin'ny sisin'ny sisiny. - Ie.
Mba hanampiana fihodinana iray hafa amin'ny fampitahantsika dia hampitahantsika ihany koa ny kodiarana tsy misy fantsona. Eny, ny kodiarana tsy misy fantsona dia mitovy amin'ny kodiarana clincher, afa-tsy ny fantsony. Fa kosa, mifototra amin'ny kodiarana somary hafa kely misy vakana somary matevina kokoa izy io ary misy tombo-kase ranon-javatra ao anatiny mitazona ny zavatra iray manontolo hidina amin'ny rivotra. - Fony matihanina izahay dia saika nitondra kodiarana tubular fotsiny.
Saingy hatramin'ny nisotroananay fisotroan-dronono dia nitaingina kodiarana clincher tamim-pifaliana foana izahay, izay mitarika antsika hanontany tena hoe nahoana isika no mila tub Ka ndao hiezaka hamaly ity fanontaniana ity - Eny. Ka ilay fanandramana kely nataonay. Manana kodiarana telo mitovy ReynoldsAs assault SLG izahay.
Eny, lazaiko fa mitovy, mazava ho azy fa kodiarana tubular. Ka tsy manana farango amin'ny sisiny hitazomana ny kodiarana ianao - Ka raha hitanao mazava tsara izany, Si, mpanasa lamba izany. Ka tsy mitovy mihitsy izy ireo.
Fa maninona eto ambonin'ny tany no manana mpanasa lamba? - Te hanana kodiarana manjelanjelatra mamirapiratra aho mitaingina cyclocross amin'ity ririnina ity - Ka noho izany dia hanaiky lembenana amin'ny fanandramana ianao satria fotsiny hoe mila kodiarana mamirapiratra ho an'ny ririnina. Ary mazava ho azy fa i Dan irery no manana bisikileta misy frein disc, ka tsy maintsy mipetraka amin'ny bisikilet'i Dan aho. - Azafady, Mat.
Mahatsiaro ho nafoiko ianao - nataonao izany, nefa zavatra iray. Fa aleontsika manohy ny fanandramana, sa tsy izany? - Ie. ♪ ♪ - Ka iza amin'ireo masontsivana ireo no misy fiantraikany amin'ny safidin'ny kodiarana? Andao hiatrika ny lanjany aloha.
Amin'ity tranga ity, ny kodiarako tubular dia milanja 1,365 grama raha ampitahaina amin'ny kodiarana climpher izay 1.515 grama. Tsy latsa-danja noho izany, fa sarotra kokoa. Nefa tadidio fa kodiarana manokana ho an'ny kapila ity ary mavesatra 50 grama ho an'ny hub fotsiny.
Ka raha ampitahaintsika ny kodiarana clincher mitovy amin'ity tranga ity dia maivana 200 grama ny kodiarana tubular. Fa inona ary no mitranga rehefa manampy kodiarana amin'ilay mifangaro isika? Eny, ny pne tubular dia mazàna 50 grama mahery noho ny pne clincher. Fa hevero indray fa efa ao ilay hosotra.
Amin'izay dia mivoaka mora kokoa izy. Ary rehefa apetrakao amin'ny tubeless ao anaty mix, dia tsy hitovizan'ny tubeless sy clincher amin'izao fotoana izao. Ka amin'ity tranga ity dia tsy misy sazy mavesatra amin'ny fandehanana tubeless - noho izany dia hitantsika fa mora kokoa ny fandroana na ny kodiarana tubular iray manontolo.
Ary tena volom-borona kely amin'ny satroko. Ary izany no ampiasain'ny mpomba azy ireo. Ankehitriny, ny tubeless dia tsy manome afa-tsy grama vitsivitsy raha oharina amin'ny kodiarana clincher - fa angamba ny zava-dehibe indrindra amin'ny rehetra dia ny fahatsapany eny an-dalana.
Ka andeha mitaingina bisikileta isika, Matt, ary hizaha raha afaka mitsapa azy isika. Te-hitondra tubeless aloha ve ianao? - mitaingina bisikileta Dan aho, marina? - Ie, niresaka toy ny rajako iray. Handeha kodiarana aho. ♪ ♪ - Tena tiako ny kodiarana tubular tsara.
Na dia tsy manantena aho fa tena mila azy ireo mihazakazaka izy ireo, heveriko fa raha matotra amin'ny fampisehoana ianao dia ny tuba no tena lalan-kaleha. Eny, voalohany indrindra, maivana kokoa izy ireo, fa ho ahy dia ny traikefa amin'ny fiara ihany no mahatonga ny fahasamihafana. Ny tiako holazaina dia, amin'ny aspalta malama dia saika mihira anao izy ireo.
Ary tena mamaly tokoa izy ireo. Na dia tsy maintsy ekeko aza fa ny tombony amin'ny famafana azy ireo amin'ny 180 PSI dia hita fa maharatsy azy ankehitriny satria mihodina tsara kokoa ny kodiarana amin'ny tsindry somary ambany. Fa na dia mihombo ho 100 PSI aza ireo dia mahatsiaro tena ho lehibe tokoa.
Mahatsiaro ho manidina aho - Tsara daholo ny manana kodiarana tubular mahafinaritra ho an'ny hazakazaka fotsiny, ary aza diso hevitra aho, heveriko fa zava-dehibe ny mitahiry lanja 200 grama. Saingy ny zava-misy dia mandreraka be ny fametahana kodiarana. Ary raha mahazo kodiarana ianao, dia lafo be koa ny manolo ny kodiaranao.
Ny fanandramana manamboatra azy io dia mbola manahirana kokoa noho ny fametahana azy amin'ny voalohany. Tsy mahagaga raha tena tia azy ireo ny matihanina. Ny tiako holazaina dia hoe tsy mila mametaka kodiarana tubular mihitsy ianao amin'izay mety tena tianao ny mieritreritra azy ireo.
fiofanana miampita ho an'ny bisikileta
Ny tena izy dia tsotra fotsiny ny kodiarana clincher. Fa ankoatr'izay dia hitako fa ny kodiarana clincher tena mahery miaraka amina fantsom-by amin'ny faran'ny kodiarana karbaona dia tena tsara. Raha ny marina dia heveriko fa afaka mamantatra ny mahasamihafa azy. - Heveriko fa marina aho - Tsy azoko antoka fa hevitra tsara izany, Mat. - Hitan? - Tsy tsara.
Izay no zava-dehibe eto - Tsia. Azoko antoka izany. Heveriko fa tsy haiko ny manavaka ny hafa, angamba angamba raha nihazakazaka mafy be aho.
Tsia, na dia tsy hitako aza ny manavaka ny fahasamihafana. ♪ ♪ Eny, tsy azo lavina izany raha nijery lahatsoratra ho an'ny GCN Talohan'ny nampiasako ny kodiarana tsy misy fantsona, somary tototry ny zava-bitan'izy ireo aho. Nahatsapa ho tsy nisy namaly izy ireo teny an-dalana, maty kely.
Saingy tokony holazaina izany, satria nametraka kodiarana roa hafa tamin'ny kodiarana karbaona iray mahafinaritra aho, dia tsy hitako hoe hafa kely. Mbola tsy azo lavina fa ny fiarovana an-tsokosoko mahavariana amin'ny fanesorana ny fantsom-borona ary noho izany dia manala ireo teboka mihidy sy mampiasa ny tombo-kase hamenoana lavaka kely, fa ny kalitaon'ny mitaingina dia tsara lavitra kokoa. Tsy azoko antoka tanteraka raha mitovy amin'ny kodiarana tubular izy ireo, mbola ny fenitra volamena, saingy mieritreritra aho fa tsara ireo.
Fanampin'izany, mora kokoa ny mametraka azy ireo noho ny teo aloha. Azoko atao ny tsy misy levers kodiarana, tsy misy adin-tsaina, tsy misy korontana - midika ve izany fa akaiky ny ora amin'ny kodiarana tubular? Ataoko angamba fa tsy izany. Mbola mahatalanjona ihany izy ireo na eo aza ny valin'ny fanoherana ary tsy isalasalana fa ny kodiarana ihany no misafidy rehefa mitaingina cyclocross.
Ary mazava ho azy fa rehefa eny an-dalana ianao dia manana safidy hamily azy ireo alohan'ny ahatongavan'ny fiaran'ny ekipa anao. Fanampin'izay, hoentin'izy ireo any amin'ny kilaometatra farany farany 3 kilometatra farany ianao - eny. Ary ahoana ny amin'ny tubeless? Raha manana kodiarana fisaka be ianao dia tsio-drivotra tanteraka izy ireo, hevitra mamirapiratra fotsiny.
Ny fiheverako manokana an'io koa dia mihalefaka, indrindra amin'ny fironana vaovao mankany amin'ny kodiarana midadasika. Raha mitaingina zavatra toa 27 mil na lehibe ianao dia mamiratra ny tubeless. Ny kodiarana lehibe kokoa miaraka amin'ny fihodinan'ny tsindry kely dia tena tsara ary mahazo aina koa.
Fa manokatra safidy vaovao mitondra fiara ihany koa izy ireo. Na manana bisikileta fiaretana amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena rehetra ianao miaraka amin'ny vatokely na bisikileta mahazatra fotsiny, ny kodiarana tsy misy fantsona lehibe kokoa dia hamela anao tsy ho eny an-dalana. Na inona na inona mety ho anao. - Eny.
Fa tubs, heveriko fa hijanona izy ireo, tsy misy isalasalana izany. Ary vao maika nanjary malaza ny tubeless satria aleon'ny olona ny kodiarana midadasika kokoa sy ny sisiny midadasika kokoa. Saingy heveriko fa ny kodiaran'ny safidy dia mbola ho kodiarana mahery sy fantsom-batana amin'ny kodiarana mendrika. - Heveriko fa izany.
Ka mankanesa any Matt, amin'ity safidy moto ity, iza amin'ireo no horaisinao? - Eny, andao lazaina fa niditra tamin'ny hazakazaka indray aho, ary tsy isalasalana fa hampiasa tuba aho. Nampiasako izy ireo taloha, mahatsapa faingana izy ireo ary noho ny antony azo ampiharina fotsiny, hanampy anao amin'ny toe-javatra mekanika sarotra sasany izy ireo. - Heveriko fa na dia nihazakazaka aza aho dia nampiasa kodiarana clincher.
Heveriko fa tsy hisy hamikitra amiko intsony ny kodiarako. Ary ny mpangalatra avo lenta izay hitanay dia ny haben'ny tubo. Tsy misy rano? Tena te-ho any tokoa aho, fa ho ahy dia tsy misy toy izany ny isan'ireo mpanamboatra mandeha amin'ny lamasinina tsy misy fantsona amin'izao fotoana izao.
Tsy manana safidy te hisafidy ny kodiarana tiako aleha. Saingy amin'ny fotoana sasany dia hitondra kodiarana tsy misy fantsona aho. Ie.
Ankehitriny, raha te hahafantatra ny fomba fampidirana kodiarana tsy misy fantsona ianao satria izy io na mety ho somary fiddly, dia manana lahatsoratra iray izay mampiseho aminao ny fomba hanaovana azy any ambony izahay. Na, raha te hahalala fomba hametahana kodiarana tubular toy ny pro ianao, dia afaka manindry fotsiny ianao avy eo ary mamaky - ary hisoratra anarana amin'ny GCN, dia ahoana? Tsindrio ny kodiarana kapilan'i Dan? - Miaraka amin'ny lasely - Somary ambany izy io - Te hiala amin'izany ve ianao - Ary ny kodiarana izay nandidianao ny tenanao tamin'ny vanim-potoanan'ny cyclocross. Fantatrao fa mahasosotra azy io izao rehefa nifindra ny sezany ianao ary tsy nanisy marika izany. - Fantatro fa tsy nanisy marika an'io koa aho, sa tsy izany? Aza miteny azy, avelao fotsiny toy izany.- Oh, eny.- Tsy maninona izany.- Tsara be ilay izy.- Hijery an'ity ve izy? - Eny, hanao izy .- Mety hanao izany izy, sa tsy izany? ? - Fa horonantsarintsika ny fihetsiny rehefa hitany indray izy. - Ie, azo antoka. - Ho tsara izany.
Volamena. Ho lasa lahatsoratra iray manontolo izy io.- Fantatro.- Dan Dan i Lloyd manipy ny kilalaony amin'ny stroller toy ny pro.- Ankehitriny eto isika amin'ny kodiarana tsy misy fantsona.
Eny, holazaiko aminao ny tsiambaratelo kely iray, tena nitondra an-dry zareo aho nandritra ny roa volana farany ary ilay tsiambaratelo kely hafa izay hampahafantariko anao dia ny zava-misy fa tamin'ny voalohany dia tsy nanao akory aho fantaro fa nitondra azy ireo aho. Nihevitra aho fa handeha amin'ny kodiarana nentin-drazana. Rehefa nosokafako ny peratra fanidiana, nieritreritra aho fa toa tsy misy ilana azy loatra ary tsy dia matihanina loatra ary mitete daholo ny ronono, vao hitako fa nisy zavatra tsy nety ary ny tena nitaingenako ity fa tsy ny kodiarana.
Vonona ve ny GP5000 Tubeless?
Tsy tonga ny GP TT atubelesssafidy. Midika izany fa rehefa very ny hafainganana, nyGP5000 tsy misy fantsonakodiarana manolotra fiarovana tsara indrindra amin'ny puncture izay ahafahan'ny famehezana tombo-kase kely sy punctures. Ho anay anefa, na eo aza ny valiny mahaliana dia azonay antoka fa ny fingotra mihidy sy ny rivotra no ho avy.
Vonona tsy hanana Tubeless ve ny rantsana mavesatra manokana?
Ny tahirymanokanakasety diatubeless vonona.
Mahazo aina kokoa ve ny kodiarana tsy misy fantsona?
Kodiarana tsy misy ranomanasongadina ny fizarana ankapobeny mitovy amin'ny clincher mahazatra, fa tsy misy fantsom-batana.Kodiarana tsy misy ranomanolotra ihany koa ny fahaizana mihazakazaka tsindry ambany kokoa ho an'ny fihazonana tsara kokoa symahazo aina kokoamitaingina, dia betsakaBebe kokoamahazaka fisaka, ary nykodiaranadia mety tsy hisaraka amin'ny sisiny raha manao fisaka.14. 2020.
Hafainganana ny kodiarana tsy misy fantsona?
nykodiaranatsy mila fantsonaHaingankaingana, na dia vola kely fotsiny aza! Mpanamboatra lehibe iray no nanao doka momba nykodiarana tsy misy fantsonamiaraka amin'ny teny filamatra Tsy misy foanaHaingankaingananoho ny zavatra. Nanjary angano hafa io.Kodiarana tsy misy ranomanana tombony tena izy, fa tsy iray amin'izany ny hafainganana.
Maharitra hafiriana ny kodiarana tsy misy fantsona?
STAN'S: Roa ka hatramin'ny fito volana, miankina amin'ny hafanana sy ny hamandoana. Arakaraka ny maha-mafana sy ny fahamainana ny toe-piainana no mahamaimbo azy. TATRATRA ORANGE: Miankina amin'ny temps sy ny hamandoana, ny fotoana fandehanana ary ny jeografia, ianaotokonymahazo iray hatramin'ny telo volana ho an'nytubelessmanangana, ary hatramin'ny enim-bolana ao anaty fantsona.02/19/2014
Inona no haingana tsy misy tubily na clincher?
Satria tsy manana fantsona anatiny izy ireo dia maivana ary farany ary tena mahomby indrindra fa haingana izy ireo! Làlanatubelessambany ny fanoherana ny kodiarananoho nyny an'ny roaclincherssy ny tubular vokatry ny fifanenjanana eo amin'ny fantsona anatiny sy ny casing nesorina.
Iza no Tyro tsy misy tubily voafaritra tsara kokoa na kodiarana tubular?
Fanambarana manokana fa ny kodiarana tsy misy fantsona vaovao dia sady haingana no grippier noho ny tubular azo oharina. Tamin'ny 260g nitaky kodiarana 700 × 26mm dia ara-dalàna raha tsy maivana loatra.
Iza no talen'ny Tyro manokana sy fantsona?
Ny fampahalalam-baovao nataon'ny Specialized momba ilay Turbo RapidAir vaovao dia nanonona an'i Wolf Vorm Walde, talen'ny kodiarana sy fantsom-boaloboka, nanao hoe: 'Ny tanjonay dia tsy ny hamolavola kodiarana tsy misy fantsona, fa ny kodiarana iray izay haingana kokoa, mahazo aina kokoa, mitantana tsara kokoa ary mamefy tena' .
Hatraiza ny kodiarana turbo s-works manokana?
Aza adino ny mijery ireo pejy topimaso mba hahamora kokoa ny mampitaha ny kodiarana bisikileta rehetra izay efa voasedra: ny lanjan'ny 700x24 S-Works Turbo 700x24 dia 210 grama; ny santionako dia tonga somary avo kokoa amin'ny 215 grama. Ny sakan'ny refy sy ny haavony amin'ny sisin'ny 17C, amin'ny tsindry rivotra 100 psi / 6.8 bar dia 25 sy 22 mm avy.
2017 ny ady goavana
2017 ny ady goavana - vahaolana maharitra
Bisikileta tsara ve i Giant contend 1? The Giant Contend 1 dia manolotra kalitao tsara sy mahomby ary mahatsapa haingana sy mailaka eny an-dalana. Ny valan-tseranana D-Fuse manavao dia manampy amin'ny fampihenana ny fikorontanan'ny lalana sy ny hovitrovitra, ary misy ny fametahana fefy sy fork mba hampandehanana ny kodiarana midadasika (hatramin'ny 32mm) mba hampandeha kokoa ny dia.
Karazana abs - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Inona avy ireo karazana ABS?
tour de france vaky
Tour de france wreck - vahaolana azo ampiharina
Iza no nahatonga ny fianjeran'ny Tour de France? Nitaingina ilay sora-baventy ilay mpifaninana alemanina Tony Martin ary voahitsoka. Nianjera niankohoka izy, nampidina ilay mpitaingina teo anilany ary nametraka vokatra domino izay namela ny ankamaroan'ny entana tao anaty tany na nijanona teo aorinan'izy ireo.5 дней назад
Sram mpifaninana 22 vondrona - ahoana no hamahanao
Mitovy amin'ny inona ny fifaninanana SRAM? Shimano 105
fanomezana ho an'ny mpandeha bisikileta
Fanomezana ho an'ny mpandeha bisikileta - mahita vahaolana
Inona no ahazoana olona tia bisikileta? Fanomezana mety tsara 43 ho an'ny mpitaingina bisikileta Palm Phone. palm.com. Wahoo Elemnt Roam GPS Bike Computer. Monitor amin'ny tahan'ny fo Wahoo Tickr X. Muc Off Valves 60mm tsy misy Tubeless. Topeak TT2524 Ratchet Rocket Lite DX Fitaovana. Park Tool PCS-10.2 Mijoro manamboatra bisikileta an-trano. Ass Fantsom-bola Savers. Ass Savers Fendor Bendor Reguler Mudguard.
fiakarana havoana bisikileta
Fiakarana havoana bisikileta - ny fomba fanapahana hevitra
Aiza ny fiakarana havoana bisikileta maloto? Belzika